Dood ka dhalatay xiliga la dhaarinayo Xildhibaanada cusub | KEYDMEDIA ENGLISH
Dood ka dhalatay xiliga la dhaarinayo Xildhibaanada cusub
Gudiga doorashadda ee FEIT ayaa loogu baaqey inuu faraha kala baxo ariimo aan khuseyn, islamarkaana uu joojiyo khilaafka cusub ee uu abuurayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa si adag uga hor-yimid jadwal cusub, oo uu soo saarey Gudiga FEIT ee ku aadan dhaarinta Xildhibaanada Baarlamaanka 11aad.
FEIT oo ah Gudiga doorashadda Heer Federaal ayaa ku dhawaaqday inay natiijadda doorashadda shaacin doonto 31-ka bishan, islamarkaana Xildhibaanada cusub la siin doono shahaadooyinka 5-10-ka April. Sidoo kalena dhaarinta ay dhici doonto 14-ka April.
Gudiga ayaa go'aankan soo saarey iyadoo weli qabyo tahay doorashadda, oo ay dhiman yihiin 39 kursi, kuwaasoo u xayiran khilaaf jira, gaar ahaan kuwa yaalla Garbahaarey iyo Beledweyne.
Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay in go'aanka dhaarinta iyo natiijo shaacinta uu yahay mid u yaalla Madaxda Gollaha Wadatashiga Qaran, oo ka kooban Rooble iyo Madaxda Maamullada, oo soo raaca duqa Muqdisho.
Waxaan aqbaleynaa oo kaliya jadwal iyo qorshe ay ku heshiiyaan Golaha Wadatashiga Qaran,' ayaa lagu yiri qoraallada kasoo baxay labada Maamul.
Gudiga doorashadda ee FEIT ayaa loogu baaqey inuu faraha kala baxo ariimo aan khuseyn, islamarkaana uu joojiyo khilaafka cusub ee uu abuurayo, kaasoo keeni kari inuu waqtiga sii jiitamo.
Galmudug iyo Koonfur Galbeed, ayaa shalay soo gabagabeeyay doorashadda kuraastooda, waxaana dhiman Puntland, HirShabeelle iyo Jubbaland oo wajahaya khilaafyo Beelaha leh Kuraasta oo dood ka keenay qaabka doorashadda iyo boobka ay Deni, Axmed Madoobe iyo Guudlaawe wadaan.